Amafilimu adonsela ezenzakalweni zangempela ayebathanda abantu ngaso sonke isikhathi, ngoba kuyathakazelisa kakhulu ukubona ukuthi kwenzekani ngempela. Lokhu kwandisa isithakazelo sombukeli, kukwenza uzizwe unamandla futhi uzwelana namaqhawe, kukusiza ukuba uzimelele ngokucacile endaweni yawo. Kungenye indaba ukuthi akuwona wonke amafilimu amahle kakhulu asekelwe ezenzakalweni zangempela okwenza konke okwenzekayo ekuphileni kwethu. Ngokuvamile imibhalo enjalo ihamba ne-cinema kuphela ukuphakamisa ukulinganisa. Noma kunjalo, naphezu kokungaqiniseki, amafilimu anjalo abukele, abukele futhi azobukwa.
Okukhangayo kunazo zonke izilaleli ezethusa ama-movie ezenzakalweni zangempela. Kuyinto eyodwa ukubuka ezinye izinto ezingenasithakazelo kakhulu , isakhiwo esifana ncamashi nalokho okwenzeka kumakhelwane, kanti enye ukucabanga ukuthi uhlupheke kangakanani, ukuthi ubuhlungu nokuhlupheka okungakanani. Ngethuba elincane lokuthi okwenzeka esikrinini kunemvelaphi yangempela, kuba yinto ehamba phambili. Yilokho okuhehayo, yingakho abantu bezama ukuthola ifilimu esabekayo kunazo zonke ezenzakalweni zangempela, ukuzwa imizwa yangempela, imizwelo yokwesaba nokwesaba okukhulu. Uma kungenjalo, kungani ubukela ama-movie ashaqisayo nhlobo, akunjalo?
Ngezansi ama-movie angcono kakhulu asekelwe ezenzakalweni zangempela. Buka futhi ujabulele.
Ekuqaleni kweminyaka engu-70, umbulali we-serial wabonakala eNew York. Wayebizwa ngegama elithi "Alphabet", ngoba amadolobha, amagama namazitalazo azo zonke izisulu zaqala ngenye incwadi.
Isimo saseMadland. Inganekwane yasendaweni ithi kukhona umlusi emahlathini, ngakho abafundi abathathu baya eyofuna umlumbi odumile ukwenza inkambo. Ifilimu idutshulwa ekhamera ye-amateur kanti lo mlando uqhutshwa kusuka kumuntu wokuqala ukuveza idokhumenti yemicimbi yezenzakalo. Njengoba ungakwazi ukuqagela, laba bafundi bajabha, bashiya ifilimu kuphela, ngenxa yokuthi konke kufanele kubonakale.
Uma usuke ubanjwe ebanda futhi ulambile, inkampani yabathuthekisi iyaphoqeleka ukuba yenza konke okusemandleni ukuze usinde. Ngenxa yalokhu kudingekile ukuba ungadonisi futhi ungabi nosabisa, kodwa uzame ukudla ama-comrades akho asevele ashona. Lena yindlela kuphela yokuphila, ngokudlula indlala. Noma iyiphi indlela, noma akukho lutho.
Akuyona into edabukisayo, kodwa kudingeka uphumule futhi uphephe. Ngakho, uJohn Dillinger ungumphangi oyingqayizivele wasebhange. Mayelana nale movie. UJohn unethimba elibumbene kakhulu, ngezikhathi ezithile ukushintsha izinto, kodwa ngoba lo muntu usekuqaleni kohlu lwe-FBI kulabo abadinga ukubamba. Kodwa inkinga yukuthi uDillinger uhlakaniphile, uhlakaniphile futhi uqhinga, ngakho-ke angeke abuyiselwe isamba, akukho ama-cops, ayikho ama-agent akhethekile.
Le filimu ibizwa nge-killer serial ngesineketiso esifanayo. Uhlakaniphile wahamba nabaqondisi be-oda, ephethe ukwesaba kwabakhileyo edolobheni. Ngaphezu kwalokho, i-Zodiac yazizwa ingenakuqothulwa kangangokuthi yathumela izincwadi emaphoyiseni, lapho yabonisa khona ukuhlakanipha kwabo okubuthakathaka futhi zaziswa ngesimo esibhalwe phansi lapho ubugebengu obulandelayo buyobe khona khona nalapho.
"I-Grave Digger Geisy"
UJohn Gacy ungumbulali odumile waseMelika. Igama lakhe lesidlaliso lithi "Umbulali-Clown", ngoba wayesebenza njengamahloni amaholidi ezingane. Indoda idlwengule futhi yabulala abantu abesilisa abangu-33, kuhlanganise nabantu abadala kuphela, kodwa futhi nabasakhulayo.
Izingane ezineminyaka engu-10 kuya kwengu-15 azizona izingelosi ezihle njalo nokuziqhenya kwabazali. Ngezinye izikhathi baba abahlukumezi abanesihluku, abakwazi ukuhleka usulu abantu abangenacala ngenxa yokuzijabulisa kwabo. Yilokho okwenzekayo noLucas noClementina - yizisulu zabafana abangenashumi nesithupha. Esikhathini ifilimu akukhona ukuhlukunyezwa ngokomzimba kanye negazi, kodwa ukungezwani kwengqondo kudluliselwa kahle.
I-Facebook ingenye yezinhlelo zokuxhumana ezidume kakhulu emhlabeni wonke. Ifilimu isitshela indaba endalweni yayo: mayelana nokuthi abafundi beza kanjani nomqondo wokwakha "into" enjalo, mayelana nezinkinga abafana abalindele, nokuthi kulula kangakanani ukuhamba phezulu uma lo mbono ubaluleke ngempela.
Ngokuqinisekile abafundi abaningi sebevele babone le movie, kodwa njengoba kungokwesigaba esithi " Ama-movie ahamba phambili asekelwe ezenzakalweni zangempela," akunakwenzeka ukukusho. I-chic liner enkulu yahlangana ngendlela yayo ngaphansi kweqhwa elikhulu, eveza ingozi yokufa kwabo bonke abagibeli. Indaba eyinhloko igxile kumntombazane ocebile uRosa kanye noJack omncane ompofu, owathandana, naphezu kokuvinjelwa.
"Amademoni Ayisithupha Emily Rose"
I-Exorcism iyindlela yokuxosha amademoni emzimbeni womuntu. Lokhu kuyisiko esibi nesingozi, okwakubanjwe ngaphambili. Le filimu ibonisa indaba yentombazane egama layo lingu- Emily Rose, emzimbeni ongenqamuleli amademoni ayisithupha kuphela. Ngeshwa, inqubo yokuthunjwa yayingeyona indlela engcono kakhulu.
Lawa yiwona amafilimu amahle kakhulu asekelwe ezenzakalweni zangempela. Ungakholelwa ekuqineni okwenzekayo esikrinini. Vele ubuke, ngoba konke kuthakazelisa kakhulu futhi kukhwalithi, ukwazi ukuheha bonke ababukeli.
Uchungechunge oluthi "Abafana bangempela": abadlali. Biography of Kolyan, Vovan no Antokha
Abilmansur Ablay Khan: Biography, imisebenzi kanye nezenzakalo ezingokomlando
Indlela ukukhetha ngensimbi curling
Ukuqeda amakhishi: amapaneli epulasitiki noma amathayili